Nurse Call System China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nurse Call System - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Nurse Call System ထုတ်ကုန်များ)
ရပ်ကွက်များအတွက်ဆေးရုံနံရံအိပ်ရာဌာနမှူးဘုတ်အဖွဲ့ ရပ်ကွက်များအတွက် 1. ဆေးရုံနံရံအိပ်ရာဌာနမှူးဘုတ်အဖွဲ့ ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်ပစ္စည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console အမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel...
ဆေးရုံရပ်ကွက်တပ်ဆင်ခြင်းအီလက်ထရောနစ် Interphone စနစ် ETR အီလက်ထရောနစ် Interphone System ကိုဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode...
ဦးခေါင်းယူနစ်စက်ရုံအိပ်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ပစ္စည်း 1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ပစ္စည်းအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်စက်ရုံ ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ပစ္စည်းအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel...
နံရံဆေးရေးဆေးရုံ VIP အခန်းများအတွက်ဌာနမှူးယူနစ်အိပ်ရာ 1 ။ Compact နံရံအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါပန်းချီကားများဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က,...
Nurse Call System nurse call system Hospital Nurse Call System nurse calling system Nurse Patient Nurse Call System nurse call station system hospital nurse call system Medical System